IBelvédère des Cotilles - I-Airbnb
IBelvédère des Cotilles
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguFrédéric
UChâteauponsac uthe iPerle de la Gartempe yilali enqatyisiweyo, eyakhiwe kwindawo enamatye.
Le ndlu yindawo yakudala yeegusha ephakanyiswe kumanqanaba ama-2 isonwabela i-panorama ekhethekileyo phezu kwentlambo yaseGartempe enegadi ezithe tye, ebizwa ngokuba yibhulorho "yamaRoma", isithili esiyimbali saseMoustier kunye neCawe yaseSaint Thrse.
Amagcisa, abalobi, abakhenkethi, abathandi bembali kunye namatye amadala siyakuvuyela ukukwamkela kwindawo yethu entle yaseLimousin.
I-Le Belvédère des Cotilles yindlu ye-80m ² kumanqanaba ama-3 kwigadi enamavili kwithala.
Umgangatho ophantsi unendawo yokungena encinci enekona yayo yangasese kunye nezitebhisi ezintle ze-oki ezisebenza kumgangatho wokuqala. Kweli nqanaba kukho amagumbi okulala ayi-2 negumbi lokuhlambela elinye elineshawa nendlu yangasese. Igumbi lokulala lokuqala elinemigangatho eyi-1900 lixhotyiswe ngebhedi yobukhulu benkosikazi kunye nendlu yalo yangaphambili
Igumbi lesibini lokulala elinesimboli-mveliso lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini kwi-140. Zombini zijongene nomzantsi kwisihlambo.
Umnyango wethu omncinci wexesha elihle lomgangatho ophantsi ukhokelela kwigumbi lokuhlala elingu-25m ² kunye nekhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela kunye negumbi elincinci lokuhlala. Unganxiba amarhe amahle, amatye adibeneyo, indawo yokucima umlilo, nefenitshala efudumeleyo ukusuka kwiminyaka eyi-30 ukuya kweyi-50. Lo mgangatho uvulela kwibhalkhoni encinci yesinyithi esetyenziweyo egcwele umarquise wayo apho ungafumanisa indawo yokuqala yokubona.
Kule nqanaba izitebhisi Kuvunguza uya kuthatha ukuya kwinqanaba N-1 ukufikelela igumbi elikhulu lokuhlala 20 m². Isofa yesikhumba eguqukayo iya kukwamkela ngokufunda, ukudlala okanye umabonakude. Le ndawo ivulela kwithala elitsha lebhalkhoni ukuze ungene egadini okanye uthande indawo entsha.
Igadi yethala ivaliwe ijonge emzantsi kwi-250 m². Ihlathini kwaye ifakwe kwithala apho uza kufumana khona ipanorama.
Ungaphumla okanye ubhukishele isandi somlambo phantsi komthi womnquma oneminyaka eliwaka. Okanye usenokugaya itrout esandul 'ukubanjwa okanye ipike kwisigayo. Okanye ngena kwizihlangu zakho, uvule ucango oluncinci lwekhokhonathi, uthathe umendo ophothiweyo weCotilles osemaphandleni, uhle uye ebrorhweni ekuthiwa yiRoma, uye eGartempe, ulandele indlela yaseRoma.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Châteauponsac